Depiote Nicolas Randrianasolo : “Ny hahatongavana amin’ny fifidianana no tanjona” -
AccueilSongandinaDepiote Nicolas Randrianasolo : “Ny hahatongavana amin’ny fifidianana no tanjona”
Depiote Nicolas Randrianasolo : “Ny hahatongavana amin’ny fifidianana no tanjona”
05/06/2018 admintriatra Songandina 0
Voatendry omaly ihany, taorian’ny fametraham-pialan’ny praiminisitra teo aloha, Solonandrasana Mahafaly Olivier ny praiminisitra vaovao mandimby azy, Ntsay Christian.
Noho izany indrindra, dia nitondra ny heviny ny depiote voafidy tao amin’ny distrikan’i Betroka, Nicolas Randrianasolo, tamin’ny fanendrena praiminisitra vaovao. Nambarany fa Andriamatoa Ntsay Christian no praiminisitra nosafidian’ny Filoham-pirenena. “Nosafidian’ny Filoha tamin’ireo anarana maromaro natolotra io praiminisitra vaovao io. Tsy dia manan-kambara firy loatra ny tenako mahakasika izay, fa ny tanjona iraisana anefa dia tokana ihany dia ny hahatongavana any amin’ny fifidianana eken’ny rehetra. Izany indrindra anefa no antony goavana nanendrena praiminisitra vaovao mba hanomana ny fifidianana. Midera manokana ny Filoham-pirenena ihany koa aho manaja hatrany ny rafitra demokratika”, hoy ity solombavambahoakan’i Betroka ity.
Notsiandriany ihany koa ny mahakasika ny fanendrena mpikambana eo anivon’ny governemanta fa ny 80%-n’izany, hoy izy, dia tokony avy amin’ny maro an’isa eny amin’ny Antenimieram-pirenena. “Mazava be izany fa tokony avy amin’ny maro an’isa eo anivon’ny Antenimieram-pirenena no hivoahan’ny governemantan’ny marimaritra iraisana. Tsy misy tokony hiadian-kevitra intsony izany. Ny fanomanana ny fifidianana am-pitoniana izao no tokony hifotoran’ny rehetra”, hoy hatrany ity depiote ity.
Ankoatra izay, nanipy teny ho an’ireo depiote mivondrona etsy amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna ny solombavambahoaka Nicolas Rndrianasolo. “Tsy misy tokony hanenjehana be fahatany ny tsy mitovy hevitra amin’izy ireo. Afaka midinika miaraka eny amin’ny Antenimieram-pirenena, na ny mpanohitra na ny mpanohana. Tsy tokony hisy ihany koa ny fifampihantsiana fa izay mahasoa ny firenena sy ho an’ny tombontsoan’ny vahoaka no katsahina mandrakariva amin’ny maha depioten’i Madagasikara”, hoy ny depiote Nicolas Randrianasolo.
Hampiasa fitaovana arifomba entina hampahafantarana ny vahoaka manerana ny Nosy ny hala-bato, nitranga nandritra ny fifidianana ny faha-19 desambra teo ny mpitarika ny tolona etsy amin’ ny kianjan’ ny 13 Mai. Fohy ny fotoana ka ...Tohiny
fivoriamben’ny vondrona afrikanina : Hiompana feno amin’ ny ady atao amin’ ny kolikoly